Horudhac: West Ham United vs Manchester United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya London) – Gool FM
(Manchester) 05 Dis 2020. Taageerayaasha Premier League ayaa dib u soo laaban doona markoodii ugu horreysay tan iyo bishii Maarso, marka ay West Ham United ku soo dhoweynayso garoonka London Stadium kooxda Manchester United caawa.
Ilaa iyo 2,000 oo taageerayaal ah ayaa loo oggolaan doonaa inay ka qeyb galaan tartankan xiisaha badan ee u dhexeeya labada dhinac.
Labada kooxood ee wada ciyaaraya West Ham United iyo Manchester United waxaa u dhexeeya farqi hal dhibic ah, inkastoo ay afar boos sarreyso kooxda martida loo yahay.
Kooxda West Ham ayaan heli doonin kulankan weeraryahankooda Michail Antonio, kaasoo sheeganaya dhaawac cusub oo muruqa ah.
Andriy Yarmolenko ayaa loollan ugu jira ka soo muuqashada kulankan, kaddib markii uu ka soo kabsaday caabuqa Korona Fayras, laakiin Ryan Fredericks ayaa laga yaabaa inuu ku maqnaado dhaawac gumaarka ah.
Dhinaca kale Weeraryahanka Kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa weli cabasho joogta ah ka qaba garabka, inkastoo laga yaabo inuu haddana ku lug yeesho kulankan.
Daafacyada Luke Shaw iyo Phil Jones ayaa ah kuwa kaliya ee Kooxda Man United ka maqan.
>- Manchester United ayaa guuleysatay kaliya saddex ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka la ciyaareen kooxda, waxaana ay kala kulmeen 5 barbaro iyo 3 guuldarro.
>- Kooxda The Hammers lagu naynaaso ayaa garaaci karta Man Uniuted saddex kulan oo xiriir ah oo ay horyaalka kula ciyaarto garoonkeeda, taasoo aan garaacin kulamo xiriir ah tan iyo afar guul oo ay sameeyeen intii u dhaxeysay 1974-77.
>- Kani waxa uu noqon doonaa kulankii afaraad ee horyaalka Premier League ku dhex mara labadan kooxood, iyadoo West Ham United ay ka sarreyso horyaalka Kooxda Man United.
>- West Ham United ayaa guuleysatay shan ka mid ah siddeedeedii kulan ee horyaalka ay ciyaareen oo ay ku jiraan saddex kulan oo xiriir ah oo ay adkaatay.
>- Inay haystaan 17-dhibcood waa heerkoodii labaad ee ugu dheeraa Premier League kaddib 10 kulan oo la ciyaaray, waxaana ay heleen 20-dhibcood heerkaan oo kale fasal ciyaareedkii 2015-16.
>- The Hammers ayaa la garaacay kaliya hal jeer todobadeedii kulan ee la soo dhaafay oo ay horyaalka ku ciyaartay garoonkeeda, waxaana ay haystaan 4 guul iyo 2 barbaro.
>- Waxay dhalinayeen goolka furitaanka ciyaarta shan kulan oo isku xigta oo horyaalka ah, waana rikoorkoodii ugu dheeraa tan iyo bishii Maarso sanadkii 2006.
>- Iyadoo ka hoos ciyaareysa tababare David Moyes, West Ham ayaa kaliya guuleysatay labo jeer 20-keedii kulan ee horyaalka ay ku wajaheen kooxaha lixda sare, waxaana ay la kulmeen 7 barbaro iyo 11 Guuldarro.
>- Lix ka mid ah 17 gool oo ay horyaalka ka dhaliyeen xilli ciyaareedkan, waxa ay dhaliyeen 15-ka daqiiqo ee ugu dambeysa kulammada.
>- Moyes ayaa guuleystay 17 kulan, waxaana uu guuldarro la kulmay 11 kale 34-tiisa kulan ee Premier League uu hoggaamiyey kooxda Manchester United intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii 2013-14.
>- Manchester United ayaa guuleystay saddex kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League.
>- Man United ayaa bannaanka ku soo adkaan karta shanteeda kulan ee furitaanka horyaalka (away) xilli ciyaareedkan markoodii ugu horreysay tan iyo xilli ciyaareedkii 1985-86, waxayna haatan guuleysteen dhammaan afartoodii kulan ee horyaalka ay ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda.
>- Tan iyo markii uu Bruno Fernandes saftay kulankii ugu horreeyey ee horyaalka Premier League, Red Devils ayaa kasbatay ciyaar heer sare ah horyaalka, iyagoo helayey dhibco dhan 2.09 ciyaar kasta.
>- Fernandes ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horreeyey Manchester United ee lix kulan oo xiriir ah bannaanka ku soo dhaliya goolal tan iyo Denis Law sanadkii 1964-kii.
>- Ole Gunnar Solskjaer ayaan wax guul ah gaarin labada kulan ee Premier League oo isagoo tababare ah uu ka hortagay David Moyes, waxaana uu kala kulmay 1 barbaro iyo 1 guuldarro.